Xasuusta mise Jirka? – Kaasho Maanka
Qofku waxa uu qof ku yahay waa xogta uu xambaarsanyahay ee ku kaydsan maskaxdiisa, sida xasuusta, aqoonta, qibrada…iwm. Aniga iyo adiga farqiga inoo dhaxeeyaa waa in aynu ku kala duwannahy macluumaadka aynu xambaarsannahay, tusaale; anigu waxaan aqaan dadyow goortii aan magacyadooda maqlo aan soo xasuusto oo aan ka dhex baaro kaydka maskaxdayda, waxaan aqaan dhacdooyin isoo maray. Adiguna sidoo kale, waxaad wadataa macluumaadkaaga kuu goonida ah. Haddii macluumaadka ku kaydsan maskaxdayda inta lagu qaado cajalad, deetana lagu shubo maskaxdaada oo laga sii nadiifiyay macluumaadkaagii kuu qaaska ahaa, waxaa dhacaysa in aad adigu noqoto Gallad -magaca qoraha-. Qoyskaygii ayaa qoyskaaga noqonaya, waxaad walaalo u arkaysaa walaalahay, marka lagu yiraahdo war in aad Gallad tahay maxaa cadayn u ah, waxaad sheegaysaa wax aan beri hore sameeyay illeen waxa aad waddaa kaydka macluumaadkaygiye.
Haddaba haddii aniga iyo adiga la inoo kala badalo xogta ku kaydsan maskaxdeena, deetana aniga oo Gallad ah la doonayo in la i jirdilo ama la i ciqaabo, ma waxaa la ciqaabayaa qolofka Gallad ee markaan xambaarsan macluumaadka Cabdi ee ah qofkii macluumaadkiisa la igu shubay, mise waxaa la ciqaabayaa Cabdiga xambaarsan macluumaadkaygii?
Inta aan noolahay waxa aan ku dambaabayo (dambi diimeedka) waa afkayga, aragayga, adimahayga..iwm, kuwaas oo qeyb ka ah qolofka jirkayga. Insaanka dhammaantii waa ay isku raacsan yihiin in dhimashada kadib jirkeennu uu baaba’ayo oo ay quudanayaan cayayaan iyo noole kale si ay tamar uga dhigtaan. Waxa kali ah ee dhimashada kadib samada loo qaadayo waa naf (sida ay aaminsan yihiin (ahlu diinka), taasoo – inkastoo uusan caddayn sayniska – aysan kala caddayn waxa ay tahay! Ma waxaan ku sheegnaa nafta in ay tahay xasuusteenii iyo xogteenii mise waxaan ku sheegnaa in ay tahay wax kale?
QORMO LA XIRIIRTA: GAWRICII KIISHA | Bal ila sawiro akhriste !
Maalinta dadka dhintay lasoo saari doono (sida ay ahlu diinka qabaan), waxa lasoo saarayo waa qalfoof cusub. Intii aan noolaa waxaa jirkayga soo maray intaas oo unug oo isbadal ku dhacay, tusaale, unugyadda maqaarkayga intaas oo million oo jeer ayay is badaleen, oo marba unugyo hor leh ayaa fuulayay maqaarkayga, badalayayna kuwa dhintay oo daatay. Sidoo kale, cidiyaha ayaa ayaguna intaas oo goor korayay mar walbana la gaabinayay, markaa maadaama ay yihiin xubnahaasi kuwa aan ku dambaabo had iyo goor, waa in aan xasuusanaa in ay ayagu mudanyihiin in la ciqaabo. Haddaba maalinta la isi soo saarayo, ma waxa ay noqonaysaa in dhamaan wixii cidiyo ahaa ee aan iska guray la igusoo xiro oo waliba isla ayagii ah oo aanan ahayn kuwa cusub, sidoo kale, dhammaan wixii unug iga dhacay intii aan noolaa ee aan ku dambaabi jiray iyo kuwii ay cayayaanku cuneen dhimashii kadib halkaasna lagu ciqaabo, mise qolof cusub ayuu Alle inta samaysto una eg kayga ayuu xasuustayda galinayaa kadibna ciqaabayaa oo uu jirdilayaa? Soo caddaalad darro noqon mayso in qolof cusub oo aanan waxba galabsan loo ciqaabo, maxaad hadda kahor hebel ciddida ugu xagatay, ayada oo ujeedka la leeyahay uu yahay in la ciqaabo uun xasuus?
Suuradda An-Nisaa, aayadda 56-aad, Alle sidatan ayuu ku leeyahay:-
“Kuwa ku kufriyay aayaadkeena , waxaan ku soli doonaa dab, markasta oo uu bislaado maqaarkooduna, waxaan ugu badali doonaa maqaar (jidh) cusub, si ay u dhadhamiyaan cadaabka, Alle waa mid weyn oo xikmad badan.”
Si cad ayuu Alle u muujinayaa in uu hadba maqaar cusub samaysan doono, maqaarkaasna uu jirdili doono!
QORMO LA XIRIIRTA: Doodda Akhlaaqda (Morality)
Dee ilaahaas maba jiree
W/Q: Gallad Gurxan 13th February 2019